» ‘सम्बन्ध हिजो बिग्रने, आज सुध्रिने हुँदैन’:Namasteeurope.com
‘सम्बन्ध हिजो बिग्रने, आज सुध्रिने हुँदैन’
भारतका लागि पुनः राजदूत प्रस्तावित गरिएका दीपकुमार उपाध्याय सगकाे संवाद :
राजदूतको प्रस्ताव पुनः किन स्वीकार गर्नुभयो ?
मुलुक र जनताको हितमा काम गर्न मैले यो प्रस्ताव स्वीकार गरेको हुँ ।
जुन आरोप लगाएर तपाईंलाइ फिर्ता बोलाइएको थियो, त्यही आरोप चिर्न त होइन ?
हेर्नुस्, राजदूत नियुक्ति सरकारले लिने निर्णय हो, मैले स्वीकृति जनाएको मात्र हुँ । भूकम्प र नाकाबन्दीजस्ता कठिन समयमा मैले जिम्मेवारी वहन गरेकै थिएँ । नेपाल–भारत सम्बन्धको संवेदनशीलता र महत्व बुझेरै नाकासम्म पुगेर पेट्रोलियम र खाद्यान्न आपूर्ति संयन्त्रका लागि नाका खुलाउने प्रयास गरेकै हुँ ।
फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिको भएकाले तत्कालीन सरकारको कार्यकालमा काम गर्न गाह्रो भएको हो । तर त्यसलाई उल्टो मैले असहयोग गरेको आरोप लगाइयो । त्यसलाई प्रमाणित गर्न मैले तत्कालीन सरकारलाई चुनौती दिएको थिएँ ।
तपाईंको नियुक्तिको औपचारिक निर्णय कहिलेसम्म होला ?
संसदीय सुनुवाइलगायतका प्रक्रिया पूरा भएपछि हुने हो । त्यो त सरकारले निर्णय गर्ने कुरा हो ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणसँगै नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ भन्ने सरकारको दाबी छ । आगामी दिनमा तपाईंको के कस्तो भूमिका रहला त ?
दुई देशबीचको सम्बन्धको परिभाषा कुनै एक समयसीमामा निर्धारित हुँदैन । कूटनीतिक कुराहरू शान्त, मर्यादित र निरन्तर चलिरहने हुन्छ । त्यसैले हिजो सम्बन्ध बिग्रियो आज सुध्रियो भन्ने हुँदैन । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध दुवै देशका लागि उत्तिकै महŒवपूर्ण भएको हुँदा सौहार्दपूर्ण बनाउने तर्फ जाँदा हाम्रो पनि विकास हुन्छ ।
तपाईं प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिमण्डलमा आउने भन्ने हल्ला छ नि?
होइन, औपचारिक निर्णय नभएसम्म कुनै पनि कार्यक्रममा म सामेल हुन्न । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि डाक्टरको समय पहिले नै तय भएको हुँदा म आज दिल्ली रोकिएको हुँ ।
साभार अन्नपूर्ण पोस्ट्